Italy: Herinandron’ny haino aman-jery sosialy any Milan sy eran’izao tontolo izao · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Bernardo Parrella
Voadika ny 27 Septambra 2010 17:55 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Français, 한국어, Italiano
Naseho voalohany tao amin'ny Global Voices tamin'ny teny Italiana ity tantara ity tamin'ny 18 Septambra 2010
Lanonana iraisam-pirenena nifangaroan-javatra maro, nihaonan'ny tanàna samihafa ny Herinandron'ny haino aman-jery sosialy ( 20-24Sept) izay natao hampifandray ny olona, ny votoatiny sy ny resadresaka manodidina ny fironana mipongatra ao amin'ny haino aman-jery sosialy sy fitaovana fitondra mandehandeha. Nahasarika olona mihoatra ny 7,500 ireo lanonana 200 isa natao tany New York, Berlin, Londre, San Francisco, São Paulo sy Toronto nandritra ny andiany farany tamin'ny volana Febroary lasa teo , raha toa tamin'ity herinandro ity ka fotoan-dehibe mifanotona maro no nomanina tany Los Angeles, Bogotà, Buenos Aires, Mexico , ary Milan [it]. Tany New York tamin'ny volana Febroary 2009 no natao voalohany ny herinandron'ny haino aman-jery sosialy ary nahitana olona maherin'ny 2,500 nanatrika ireo fotoan-dehibe maro samihafa niisa efapolo.
Fotoan-dehibe maherin'ny 90 no nomanina tao Milan [it] fotsiny, izay karakarain'ny olona maherin'ny 250, anisan'izany ny mpitoraka bilaogy, ny mpandraharaha ary ny manampahaizana manokana. Fotoan-panokafana manetriketrika no hatao ny Alatsinainy 20 Septambra ao amin'ny Anjerimanontolo any Milan izay hifantoka amin'ny resaka City 2.0 [it] momba ny fomba hahafahan'ny teknolojia, ary ny haino aman-jery sosialy indrindra indrindra, hanohana ny fampandrosoana maharitra ho an’ ireo tanànan'ny ampitso. Raha araka ny vinavina sasantsasany, dia maherin'ny 70%n'ny vahoaka eran-tany no hipetraka any amin'ny tontolo an-drenivohitra amin'ny taona 2050.
Mihodina amina toerana maro sy media anaty aterineto ny fomba fiasa feno ataon'ny herinandron'ny haino aman-jery sosialy, miainga avy amin'ny tranonkala fototra sy ny kaonty Twitter ka tonga hatrany amin'ny pejy Facebook sy ny fantsona YouTube. Samy mikarakara ny tranonkalany sy ny haino aman-jery sosialiny ihany koa ny tanàna tsirairay. Ity misy horonantsary mihetsika fampahafantarana nalaina tany Piazza Duomo ambanivohitr'i Milan:
Eo ankilan'ireo resadresaka maro sy fampahafantarana maro mifandray amin'ny fialamboly, kasinga vaovao sy seha-pifaneraserana, lamaody, fandraharahana, sy ny sisa, dia hiresaka ireo olana mifandray amin'ny tontolon'ny tsy maka tombony, ny haino aman-jery vaovao ary ny haino aman-jerin'olon-tsotra ny fandaharan'i Milan . Ohatra hoe, hisy izao ny fampahafantarana ireo tetikasa atao any Italy toy ny Socialidarity 2.0 (vaovao sosialy & tsy maka tombony) sy ny Eticmedia (Fahitalavitra an-tranonkala miorina avy amin'ny Fandraisana Andraikitra ara-tsosialin'ny orinasa), raha mandritra izany fotoana izany ny ekipa eo an-toerana kosa dia hanolotra tsy an-kiato fampianarana aterineto ho an'ireo efa zokinjokiny.
Ny tolakandron'ny Alarobia 22 Septambra [it], hanentana andiana lohahevitra maro mikasika ny votoatin-javatra novokarin'ireo mpampiasa kaonty, indrindra indrindra ny manodidina ny fivoaran'ny bilaogy amin'izao fotoana izao sy ny fahombiazana tsikelikelin'ny Twitter ary ny Facebook amin'ny fizaram-baovao ny mediateca Santa Teresa . Ho resahina ao ihany koa ny fifandraisan'ny haino aman-jery nentim-paharazana sy ny fironana vao misonga izay miankina tanteraka na amin'ny amoahany fotsiny amin'ny loharanom-baovao avy amin'ny aterineto. Raha adika tsotsotra izany dia, ahoana no fiantraikan'ny haino aman-jery sosialy amin'ny tontolon'ny fanangonam-baovao sy ny indostrian'ny fampahalalam-baovao? Afaka handray anjara lehibe amin'ny famaritana ny tontolo tahaka izany ve ny haino aman-jerin'olon-tsotra amin'ny ho avy ? Ny resaka an-databatra boribory dia ahitàna ny Global Voices amin'ny teny Italiana [it], soloin'i Eleonora Pantò tena.
Any amin'ireo tanàna toa an'i Buenos Aires ary indrindra fa ny tanànan'i Mexico, hiresaka mikasika ny fampianarana mihitsy koa ireo mpandray anjara eo an-toerana, toy ny hetsika izay haharitra andro iray manontolo antsoina hoe Educación 2.0 [es], izay hifantoka amin'ny fiaraha-miasan'ny mpampianatra sy ny mpianatra mampiasa ny haino aman-jery maro karazana sy ireo fitaovana fampiasa any an-dakilasy . Nanao fampielezan-kevitra hanangonam-bola ny ekipan'ny Los Angeles hanohanana ireo ankizy eo afovoan'ny Skid Row — hanapariahana sy hanamafisana ny fandraisan'anjara mivantana ataon'ireo mponina nomerika ao anatin'ny fiarahamonina mivelatra kokoa.
Fanampin'ireo fotoan-dehibe ifanatrehana, ny mpikarakara ilay herinandron'ny haino aman-jery sosialy dia hanao fampitana mivantana ihany koa an'ireo fotoan-dehibe maro sy ny fotoana ahitana ireo resadresaka nifanaovana tamin'ny vahiny ao amin'ny socialmediaweek.org, mba hahatratrarana ireo vahoaka maneran-tany. Nomanina ihany koa ny fiarahana miaina mivantana ny anjara asan'ireo mpandray anjara any amin'ireo tanàna samihafa (izay faritra mitovitovy ora ka azo anaovana an'izay). Ary mazava ho azy, misy foana ny filàna ireo mpilatsaka an-tsitrapo hanampy amin'ny fikarakarana na fanapariahana ireo fotoan-dehibe ao an-tanànanao amin'ny herintaona, mba hanaparitaka ny teny eran'izao tontolo izao …